Vaovao - Fomba fanapahana isan-karazany amin'ny milina fanapahana laser
Masinina fanapahana lozisialy 6090 CNC
Masinina manapaka tamin'ny laser fibre 3015
Fomba fanapahana isan-karazany amin'ny milina fanapahana laser
Ny fanapahana laser dia fomba fanodinana tsy misy fifandraisana miaraka amin'ny angovo avo sy mifehy tsara ny hakitroka. Ny faritra laser misy hakitroka angovo avo lenta dia aorina aorian'ny fampifantohana ny taratra laser, izay manana toetra maro rehefa ampiasaina amin'ny fanapahana. Misy fomba efatra samihafa amin'ny fanapahana laser mba hiatrehana toe-javatra samihafa.
1. fanapahana malefaka
Amin'ny fanapahana vy amin'ny laser, ny fitaovana miempo dia esorina amin'ny alàlan'ny rivotra rehefa aondraka eo an-toerana ilay fitaovana. Satria ny famindrana fitaovana dia tsy miseho afa-tsy amin'ny toetrany misy rano, io dingana io dia antsoina hoe fanapahana fanalefahana laser.
Ny lasantsy laser misy entona manapaka tsy fahadiovana avo lenta no mahatonga ilay zavatra natsonika nandao ilay hantsana, raha ny entona aza tsy tafiditra tamin'ny fanapahana. Ny fanapahana ny laser dia afaka mahazo hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny fanapahana gasification. Ny angovo ilaina amin'ny gazy dia mazàna avo kokoa noho ny angovo ilaina amin'ny famoahana ilay fitaovana. Amin'ny fanapahana vy amin'ny laser, ny ampahany amin'ny laser ihany no tafiditra ao. Ny hafainganam-pandeha farany fanapahana dia mitombo amin'ny fitomboan'ny herin'ny laser, ary mihena saika mihodina amin'ny fitomboan'ny hatevin'ny lovia sy ny hafanana miempo ara-nofo. Raha misy herin'ny laser iray, ny antony mametra dia ny tsindry avy amin'ny rivotra amin'ny hady sy ny fitarihana hafanan'ny fitaovana. Ho an'ny fitaovana vy sy titanium, ny fanapahana ny metaly laser dia afaka mahazo ny nonchidation notch. Ho an'ny fitaovana vy, ny haavon'ny herin'ny laser dia eo anelanelan'ny 104w / cm2 sy 105W / cm2.
2. fanapahana vaporization
Amin'ny fizotry ny fanapahana laser-laser, ny hafainganam-pandehan'ny mari-pahaizana ambonin'ny tany miakatra amin'ny mari-pana dia mahadomelina haingana ka afaka manalavitra ny fiempo vokatry ny fitarihana hafanana, noho izany ny akora sasany dia lasa etona ary manjavona, ary ny akora sasany atsofoka lavitra ny ambanin'ny fanapahana seam amin'ny alàlan'ny fandefasana entona fanampiny toy ny ejecta. Herin'ny laser tena avo lenta no ilaina amin'ity tranga ity.
Mba hisorohana ny etona ara-materialy tsy hirona amin'ny rindrina, dia tsy tokony ho lehibe kokoa noho ny savaivon'ny taratra laser ny hatevin'ny fitaovana. Ity fizotrany ity dia tsy mety raha tsy amin'ny fampiharana izay tokony hialana amin'ny fanafoanana ireo fitaovana narendrika. Raha ny marina, ny fizotrany dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ny sehatry ny fampiasana alloys miorina amin'ny vy.
Ny fizotrany dia tsy azo ampiasaina amin'ny fitaovana toy ny hazo sy ny seramika sasany, izay tsy ao anaty toetran'ny olona ary mety tsy hamela ny etona hitombo. Ho fanampin'izany, mazàna ireo fitaovana ireo dia tsy maintsy mahatratra fanapahana matevina kokoa. Amin'ny fanapahana lasantsy laser, miankina amin'ny hatevin'ny fitaovana sy ny kalitaon'ny hazo ny fifantohana tsara indrindra. Ny herin'ny laser sy ny hafanan'ny etona dia misy vokany eo amin'ny toerana ifantohana tsara indrindra ihany. Ny hafainganam-pandrefesana farany ambony dia mifanitsy amin'ny hafanan'ny gasina ny fitaovana rehefa raikitra ny hatevin'ny lovia. Ny haavon'ny herin'ny laser ilaina dia lehibe kokoa noho ny 108W / cm2 ary miankina amin'ny fitaovana, ny halalin'ny fanapahana ary ny toerana ifantohan'ny andry. Raha misy hatevin'ny takelaka iray, amin'ny fiheverana fa ampy ny herin'ny laser, ny hafainganam-pandeha fanapahana farany ambony dia voafetran'ny hafainganam-pandehan'ny jet gazy.
3. fanapahana tapaka tapaka
Ho an'ireo fitaovana mora vaky izay mora simba amin'ny hafanana, ny fanapahana haingam-pandeha haingam-pandeha amin'ny alàlan'ny fanamainana laser dia antsoina hoe fanapahana tapaka tapaka. Ny tena atiny amin'ity fizotran'ny fanapahana ity dia: ny fantsom-boaloboka dia manafana faritra kely misy zavatra malemy, izay miteraka gradient amin'ny hafanana lehibe sy ny fihenan'ny mekanika matotra ao amin'io faritra io, mitarika amin'ny famoronana triatra ao amin'ilay fitaovana. Raha mbola voatazona ny gradient fanafanana fanamiana, ny taratra laser dia afaka mitarika ny famoronana triatra amin'ny làlana tiana rehetra.
4. fanapahana fihenan'ny oxygenation (fanapahana ny lelafo laser)
Amin'ny ankapobeny, ny entona tsy mitohana no ampiasaina handrendahana sy hanapaka. Raha oksizenina na gazy mavitrika hafa no ampiasaina, dia halefa eo ambanin'ny fiparitahan'ny taratra laser ny fitaovana, ary hiteraka loharano hafa iray hafanana noho ny fiatra simika mahery vaika miaraka amin'ny oksizena mba hanafanana bebe kokoa ilay fitaovana, izay antsoina hoe fanalefahana sy fanapahana oksidasiana. .
Noho io vokany io, ny tahan'ny fanapahana vy vy mirindra miaraka amin'ny hateviny mitovy dia mety ho avo kokoa noho ny fanapahana vy. Etsy ankilany, ny kalitaon'ny fisisihana dia mety ho ratsy kokoa noho ny fanapahana fiempo. Raha ny marina dia hamokatra hantsana midadasika kokoa izy io, fahasarotana miharihary, fitomboan'ny faritra misy ny hafanana ary ny kalitao ratsy kokoa. Ny fanapahana ny lelafo amin'ny laser dia tsy tsara amin'ny famolavolana modely mazava sy zorony maranitra (atahorana handoro ny zorony maranitra). Ny laser mode pulse dia azo ampiasaina hamehezana ny effets thermal, ary ny herin'ny laser no mamaritra ny hafainganan'ny fanapahana. Raha misy herin'ny laser iray, ny antony mametra dia ny famatsiana oksizenina sy ny fitarihana hafanan'ny fitaovana.